विश्वका विभिन्न देशमा देखिएको मंकीपक्स के हो ? यस्ता छन् लक्षण र उपचार « Canada Nepal
विश्वका विभिन्न देशमा देखिएको मंकीपक्स के हो ? यस्ता छन् लक्षण र उपचार
काठमाडौं – अहिले विश्वका विभिन्न देशमा मंकीपक्स नामको दुर्लभ रोग देखिएको छ । कम्तिमा १२ देशमा मंकीपक्सका ८० भन्दा बढी केसहरू पुष्टि भएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले कुनै पनि देशको नाम नलिइकन संदिग्ध केसहरू अनुसन्धान गर्दै यो अझै बढ्न सक्ने भन्दै चेतावनी पनि दिएको छ ।
हालसम्म अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलियाबाहेक ९ ओटा युरोपेली देशहरुमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । यसैबीच हामिले पनि यसबारे जानकारी लिन जरुरी छ । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा। रविन्द्र पाण्डेका अनुसार मंकी पक्स स्मल पक्स अर्थात् बिफरजस्तै तर दुर्लभ रोग हो ।
यो रोग मंकी पक्स भाइरसबाट लाग्दछ । यो रोग संक्रमितसंगको संसर्गले एकबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दछ । यो दुर्लभ रोगको प्रसारण गति मन्द छ, केहि हप्तामा निको हुन्छ तथा जोखिम धेरै छैन ।
मंकी पक्सको खोप नभए तापनि बिफरको खोपले ८० ५ काम गर्दछ । हालसम्म उपरोक्त देशहरुमा ८० जना संक्रमितको पहिचान भएको जनाइएको छ । सन् १९५८ मा प्रयोगशालामा पहिलोपटक बाँदरमा यो भाइरस देखिएकोले यसलाई मंकी पक्स भनिएको हो ।
यो जनावरबाट मान्छेमा सर्ने रोग हो । मंकी पक्स लागेका व्यक्तिको संक्रमणकाल ७ देखि १७ दिनको हुन्छ । हल्का ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु, मांशपेशी दुख्नु, ढाड दुख्नु, ग्रन्थीहरु सुन्निनु, शरीरमा गिर्खाजस्ता बिमिरा आउनु आदि यसका लक्षण छन् । यसको संक्रमणदर न्यून छ भने मृत्युदर निकै कम छ । यसको ठोस उपचार पनि छैन । यो रोग हाल एसियामा देखिएको छैन ।
प्रकाशित मिति : जेठ ८, २०७९ आइतबार ४ : ०९ बजे